Sei kubvisa Activation Lock kubva kune yako iPhone | IPhone nhau
Activation Lock inodzivirira yako data nekudzivirira mumwe munhu kushandisa yako iPhone kana yakarasika kana kubiwa. Asi dzimwe nguva zvinokonzeresa matambudziko kune vashandisi vanokanganwa password yavo. Apple ikozvino inoita kuti zvive nyore uye isu tinotsanangura kuti tingazvimise sei.
Iyo Activation Lock yave chishandiso chinonyanya kubatsira kana zvasvika pakudzivirira kuba kwe iPhone yako, sezvo ichitadzisa chero ani zvake asingazive yako iCloud username nephasiwedi kubva pakushandisa yako iPhone. Kwete chete haugone kuivhura, asi haugone kuidzima kuisa yako account, uye iwe unogona zvakare kuiwana chero nguva, chero bedzi yakavhurwa uye neWiFi kana dhata yekubatanidza.
Kuriita kuri nyore uye chikamu che otomatiki yekumisikidza maitiro paunotanga yako iPhone kekutanga, kunyangwe iwe uchigara uine mukana wekuzviita kubva kuZisetwa zvechigadzirwa chako, mukati meICloud account yako mu "Tsvaga" chikamu, uchishandisa iyo "Tsvaga yangu iPhone" sarudzo. Kuti uibvise, uchafanirwawo kuisa iCloud password yako, saka kana mumwe munhu akawana mudziyo wako uye achikwanisa kuivhura, havazokwanisi kumisa chishandiso ichi pasina yako Apple password.
Asi, Ko kana iwe ukakanganwa password yako uye uchida kudzorera chako chishandiso? Eya, kusvikira zvino zvaireva kuva neApple uye kuwana mushandi kuti akubatsire kuvhura iyo, iro risiri basa riri nyore nguva dzose. Kubva nhasi Apple yakagonesa peji rewebhu mune nhanho nhanho ivo vanokutungamira nenzira yese, kunyangwe iwe usingafunge kuti vanozobvunza dhata diki. Isu tinotsanangura nhanho nhanho maitiro ekuzviita.
Para tanga iyo Activation Lock yekubvisa maitiro unofanirwa kudzvanya pa Iyi link izvo zvinokutora iwe zvakananga kune Apple webhusaiti. Kana uchinge uri mukati vanokupa mikana miviri:
Unoziva account yako ne password yako, izvo zvinoita kuti zvese zvive nyore
Unoziva account yako asi wakanganwa password yako: ivo vanokuendesa iwe kuiyo iForgot sevhisi uko ivo vanozokubatsira iwe kudzorera password yako uye kugadzira imwe nyowani. Kune izvi unofanirwa kuziva manhamba akavimbika efoni awakange wamugadzirira uye uchigona kuwana iwo, pakati pezvimwe zvinhu.
Kana zvikaitika kuti hapana imwe yesarudzo mbiri idzi inokushandira, unofanirwa kuenda kuzasi kwewebhu, uye tinya pa "Kutanga". Izvi zvinotangisa chikumbiro chekubvisa, icho chinoda kutarisa zvakanyatso tarisa kuti mudziyo wacho ndewechokwadi here, uine zvinyatso kuomarara:
Unofanira kuratidza izvozvo mudziyo ndewako, uye ivo vachakukumbira iwe serial nhamba, IMEI kana MEID
Yese data yako ichadzimwa, saka shandisa iyi sarudzo senzira yekupedzisira
Chigadzirwa haikwanise kunge uri mumamiriro akarasika kana kutarisirwa nekambani kana institution yekudzidzisa
Ukangotanga maitiro haigoni kukanzurwa
Apple inogona kuramba kubvisa kukiya kana iwe uchifunga kuti chikumbiro chako hachienderane nezvaunoda
Kuti utange kunyorera iwe unofanirwa kuisa yako iCloud account, uye sezvakaratidzirwa mune zvinodiwa, iyo serial nhamba, IME kana MEID yechigadzirwa chako. Kubva ipapo, Apple ichatanga maitiro uye inokubata iwe kuburikidza neemail yawaratidza, kuti iite yako iPhone ishande zvakare. Mushure maizvozvo Iwe uchazobvunzwa rumwe ruzivo senge iyo invoice yekutenga, nzvimbo yawakatenga iyo kana zuva raakatenga. Zvingaite senge yakawanda data, asi iwe unofanirwa kuyeuka kuti Apple inofanirwa kunyatso kujekesa kuti iyi iPhone ndeyako chaizvo nekuti kana kiyi yabviswa ichave iri "nyowani" iPhone yakagadzirira kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Sei kubvisa Activation Lock kubva ku iPhone yako kana iwe wakanganwa password